Östersund | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Jämtlands län / Östersund
Gudaha Östersumd nolasha waa ka raxeeysanaa sanadka oo dhan. Lakin xilliga jiilaalka dad badan aa uu arka in uu yahay waqtiga sanadka ugu fiican. Halkan waxa laga helaa in badan caawinaayo tayda nololeed, iyo in la fiicnaado. Magaada xoogaay ee weeyn tahay, waxeeyna lee dahay jawi nolol leh iyo soo jidasho leh.
2,502 kiilomitir oo laba jibaaran
Åre 99 kiilomitir
Sundsvall 190 kiilomitir
Stockholm 560 kiilomitir
Masafaduyeenka uu jirto shaqada, iskoolka, iyo adeega, sido kalena meelaha lagu raaxeeysto iyo howlaha xiliga firaaqad, waa masaafad dhaw. Taaso oo keeneeyso fursad lagu helo hab-nololeed leh waqti dheeraad ah si runt loo noolaado.Taasi waxaa ku dartaa habenada jilaalka oo iftin leh iyo xagaaga sax ah oo baraf badan wato.
Gudaha Östersumd waxaa ku yaalo guriyo iyo shirkado nuuc badan oo kala duwan. In kale oo ku saabsan guriyada iyo shirkadaha kala duwan bogga degmada.
Gudaha Östersund waxaa ku yaala dad loqaduyen kala duwan ku hadla waxana uu ween carabi, somali, af tigrinya, af thayland, af faarisi, af swaaxili, af ingriis, af faransiis, af isbaanish, afka waqooyiga-kurdiga, afka shiinaha iyo afka burma.
Östersund waxeey qani ka tahay howlo urureed oo leh ku dhawaad 500 oo urur, nuucyo kala duwan sidii ururada-isboortiga, ururada-howlaha dibada, ururada soo galooytiga, ururada –dhaqanka, hey'addaha samafalka, ururada howlgabka iyo kuwo kale. Waxaa jiro ururo diimeed oo kala duwan, kaniisado iyo hal masaajid. Bogga degmada waxaad ka dhex raadin kartaa ururada diiwaangalsan.
Gudaha Östersund waxaa ka heli inta badana waxa aad uu baahnaa kartid. Xafiiska shaqada, Qasnada caymeska, xafiiska canshuuraha, adeega isdhexgalka, maktabada, xafiska buulshada, dukamo badan ee bartamaha magaalada iyo carwo ku taalo magalada banankeda. Haddii la raboo adeeg dukaamo-gacan-labaad, kuwa badan oo soo bandhigaan ayaa jiro.
Xanaanada-caruuraha waxeey ku taala degmada ayadoo leh dugsi xanaaneed, xanaaada guri reereed, goobta xilliga fiiraqada, howl xanaano oo furan iyo xanaanada furan.
Degmada Östersund waxaa ku yaalo 26 dugsi hoose ee degmayada maamusho iyo dugsiyo kale oo gaar ah (baraayfat) lehna barnaamijyo iyo astaamo kala duwan, tusaale ahaan, isboorti, howlaha farshaxanka, waldorf iyo wax la mid ah. Degmada dugsiyadeeda sare ee kala duwan waxeey ka tirsan yihiin Dugsi sare ee Jämtland, waxaana jiro sadax dugsi sare oo gaar ah. Sido kale waxaa jiro dugsi sare ee degmadeed iyo gaar ah oo ah mid dhaqaameed oo loogu tala galay qofka jecel in uu barto qalabka-heesaha, jilaynimada masraxa riwaayadaha iyo howlo kale oo ku saabsan abuurid.
Dadka waa weeyn fursado waxbarasho oo badan ee ku lee yihiin Östersund. Xarunta waxbarashada waxeey lee dahay mas'uuliyada oo la soo koobay, oo loogu tala galay waxbarashada dadka waa weeyn ee Östersund. Östersund waxaa ka jiro qeeybo kala duwan oo soo bandhigo waxbarashada-dadka waa weeyn. Sido kale Jamacada Mitt intee ku taalaa, Östersund in yar oo ka baxsan waxaa ku yaalo dugsi dadka waa weeyn ee Birka.
Xarunta-waxbarashada Jamacada Mitt Dugsi sare ee Birka
Östersund waxeey lee dahay ruggag caafimaad oo badan, rugta caafimaadka ee hooyooyinka, rugta caafimaadka ee caruurta, dhakhtarka ilkaha. Hal isbaatal oo dowladeed ayaa jiro iyo kuwa kale oo gaar ah.
Haddii uu baahan tahay turjumaan markaad la xiriirayso hey'addaha dawladeed, degmada iyo maamulka gobolka markaas waad helaysaa.
Östersund waxaad uu raaci karta, kana soo raaci kartaa bas, tareen iyo diyaarad. Gaadiid baseed ee degmada lee dahay oo sii fiican uu dhisan ayaa jiro. Sido kale Östersund waxeey ku dadaleeysaa in ee lahaato jid-socod iyo jid-baaskiil.
Östersund waxaa ka jirto howlo-firfircooneed, jawi-shirkadeed iyo kalsooni-mustaqbaleed, degmadana maalgalin badan ee galisaa hormarinta suuqa shirkadaha. Shirkadaha ku yaalo degmada waa kala duwanyiihiin; laga bilaabaa washada-sameeynta ilaa shirkadaha cilmiga, adeega iyo dalxiiska.
Xafiiska degmada ee shirkadeeynta waxuu kuugu caawinkaraa shirkad-gaar-uu-waadida.
Sido kale waxaa booqan kartaa Xafiiska-shaqada ee Östersund ama ka dalban kartaa shaqo bogooda internetka.
Shirkado, taageero iyo talo-bixin
Shaqooyinka ka banaan gudaha Östersund